Mgbaàmà nke Giardiasis na Ụmụ
Giardiasis bụ ọrịa parasitic. Ndị na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ ndị na-ahụkarị bụ Giardia. Mmiri na-ekesa ha, nakwa site na kọntaktị na nri. Ị nwere ike ibute oria ma ọ bụrụ na ị na-eji mmiri na-adịghị mma, akwụkwọ nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi na-adịghị mma, ọ bụrụ na ị naghị agbaso iwu nke ịdị ọcha. Mgbe ịbanye n'ime ahụ ljamblii bi n'ime eriri afọ. Ha nwere ike ime ka ọtụtụ ọrịa dị njọ.
Kedu ka e si egosipụta ụmụ atụrụ na ụmụ?
Nri ndị na-eme ka ahụ nkoropụ na-akpalite mmeghachi omume ahụ, nsị nke ahụ. Ihe a niile na - eme ka a kwụsị ịda mbà n'oge nwata. Ụmụaka nwere ike ibute ọrịa karịa ndị okenye, ọrịa ahụ na-esikwara ụmụaka ike. Ya mere, ọ bara uru ka ndị nne na nna mata ihe mgbaàmà nwere ike ime na ụmụ giardiasis.
Ọrịa nwere ike igosipụta ọrịa mkpọnaka, ihe ịrịba ama nke ịṅụbiga mmanya ókè na allergies. Ndị nne na nna na-ege ntị kwesịrị ikiri ihe mgbaàmà dị otú ahụ:
nausea, ma vomiting bụ obere;
ala mmiri na ihe na-esi ísì ụtọ, Otú ọ dị, ọrịa a na feces enweghị ọnyá, ọbara;
ihe mgbu na-egbuke egbuke karịa otube;
ntakịrị mmụba na okpomọkụ;
adịghị ike, ike ọgwụgwụ, ncheta ncheta;
ọdịdị nke egwu egwu;
mmepe nke atopic dermatitis;
Ụmụaka nọ ruo afọ 3 na-ejidekarị njem;
abawanye na ọkwa nke eosinophil n'ọbara.
Ụfọdụ kwenyere na onye kasị nta agaghị emetụta nje. Ma ọbụna ụmụaka ndị na-erubeghị na-arahụ ma na-enye ara ara na-adakwasịkwa ọrịa a. Ha nwere ihe ize ndụ nke ibute ọrịa site n'aka nne na-elekọta nwa. Ọtụtụ mgbe, ụmụaka na-egosipụta nwa atụrụ na nwa ọhụrụ site na mgbaàmà dị otú ahụ:
nchegbu, nke a na-akpọkarị n'abalị;
ike nkewa nke gas;
nkwupụta ụkwara na akpụkpọ ahụ;
nwatakịrị nwere ike ọ gaghị eburu ibu ma rie nri.
A ghaghị ịkọ mama m ma ọ bụrụ na a na-agwọ ọrịa ahụ maka ọrịa dịgasị iche iche, ma ọ dịghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na i chere na ọrịa, ị ga-ahụ dọkịta. Ọ na-atụ aro ule, nyochaa ihe mgbaàmà, na-akọwa ọgwụgwọ maka Giardiasis. A na-eme usoro ọgwụgwọ site na ọmụmụ ihe, ọkachamara ga-ahụkwa usoro ahụ. Ọ ga-adịkwa mkpa ka ị gbasoro iwu ụfọdụ nke oriri na-edozi ahụ.
Ụmụaka ụmụ nwoke
Nwanyị dọkịta na-esi ísì ụtọ maka ụmụaka
Tracheitis na nwa - ọgwụgwọ
Enwetin - nkwusioru maka ụmụaka
Chickenpox na ụmụ - oge nkwụsị
Nwa ahụ na - akwa ụra - ihe ị ga - eme?
Sol-Iletsk - ọdọ
Bootlion Ejiji 2015
Ejiji ejiji akpụkpọ ụkwụ 2013
Rye dị ka siderat
Ịhịa aka na ntụrụndụ n'ụlọ
Nkwụsị nsị nke biogel
Na-etinye aka na nwamba - ọgwụgwọ
"Huxley" socionics - nwoke na nwanyị, nkọwa, subtypes, ọrụ
Ugboro Ojiji - Mmiri-N'oge okpomọkụ 2014
Preding Pan with Ceramic Coating
Ihe nzuzo nke ịma mma Ani Lorak
Edeghi ederede maka soseji
Kedu otu esi ahọrọ skateboard?
Gini mere nrọ ji agbapu?
Usoro mmezi maka ịla n'iyi